Man United oo Bareejo Lagu Celiyay iyo Kooxaha West Ham,Southampton,Tottenham,Swansea iyo QPR oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Aston Villa ayaa garoonkeeda Villa Park barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Manchester United.
Kooxda Aston Villa ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 18-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Christian Benteke,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Radamel Falcao ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka barbardhaca u dhaliyay kooxda Manchester United.
Ciyaaryahan Gabriel Agbonlahor ayaa daqiiqadii 65-aad ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Aston Villa.
Kooxda Manchester United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 32-dhibcood,halka kooxda Aston Villa ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 20-dhibcood.
Kooxda West Ham United ayaa garoonkeeda Upton Park 2-0 uga badisay kooxda Leicester City.
Kooxda West Ham ayaa goolka la hor martay,waxana daqiqadii 24-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Andy Carroll,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Stewart Downing ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda West Ham United.
Kooxda West Ham United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta afaraad,waxana ay leedahay 31-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseya.
Kooxda Southampton ayaa garoonkeeda St Mary 3-0 uga badisay kooxda Everton.
Kooxda Southampton ayaa goolka la hor martay,waxana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka ka dhaliyay kooxdiisa ciyaaryahan Romelu Lukaku oo weerarka uga ciyaarta kooxda Everton,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Graziano Pelle ayaa daqiiqadii 65-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Southampton.
Ciyaaryahan Maya Yoshida ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Southampton.
Kooxda Southampton ayaa afar kulan oo guul darooyin is xig xigay ka dib gaartay guusheedii ugu horeysay ee horyaalka ingiriiska.
Kooxda Southampton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 29-dhibcood,halka kooxda Everton ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 21-dhibcood.
Kooxda Tottenham Hotspur ayaa garoonkeeda White Hart Line 2-1 uga badisay kooxda Burnley.
Kooxda Tottenham ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 22-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Harry Kane.
Ciyaaryahan Ashley Barnes ayaa daqiiqadii 28-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Burnley.
Ciyaaryahan Erik Lamela ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Tottenham,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Labada kooxood ayaana qeybtii danbe ee ciyaarta wax gool ah iska dhalin.
Kooxda Tottenham ayaa horyaalka uga jirto kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 27-dhibcood,halka kooxda Burnley ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseyso.
Kooxda Hull City ayaa waxaa garoonkeeda KC Stadium 0-1 uga badiyay kooxda Swansea City.
Kooxda Swansea City ayaa goolka la hor martay,waxaana goolka uu ka yimid kubad uu daqiiqadii 15-aad ee ciyaarta uu laaday ciyaaryahan Jonjo Shelvey oo ku sii dhacday ciyaaryahan Sung-Yueng Ki.
Labaad kooxood ayaana wax gool ah iska dhalin qeybtii danbe ee ciyaarta.
Koxda Swansea City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 25-dhibcood,halka kooxda Hull City ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Queens Park Rangers ayaa garoonkeeda Lofts Road 3-2 uga badisay kooxda West Bromwich Albion.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa bilowgii ciyaarta dhalisay labo gool,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Joleon Lescott iyo Silvestre Varela.
Ciyaaryahan Charlie Austin ayaa daqiiqadii 24-aad ee ciyaarta gool rigoore ah u dhaliyay kooxda Queens Park Rangers,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Charlie Austin ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka labaad ee barbardhaca u dhaliyay kooxda Queens Park Rangers.
Ciyaaryahan Charlie Austin ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad ee guusha u dhaliyay kooxda Queens Park Rangers.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 14-aad,waxana ay leedahay 17-dhibcood,halka kooxda Queens Park Rangers ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.